Fisaonana Ilay Goavan’ny Fampianarana Yoga, BKS Iyengar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2014 6:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, srpski, English
Mpianatra iray mampihatra Uttitha Trikonasana, paozin'ny telolafy, iray amin'ny fijoroana fototry amin'ny Iyengar Yoga. Saripikan'i Matthew Greenfield avy amin'ny Wikipedia. CC BY-SA 3.0
Nodimandry teo amin'ny faha 96-taonany tapabolana lasa izay i BKS Iyengar mpampianatra Yoga malaza. Efa nampidirina hopitaly noho ny aretina nahatonga azy ho tsy afa-niaina i Iyengar. Lasa any ankoatra teo anoloan'ny fianakaviany izy. Maro ireo mpianatra sy mpankafy manerana izao tontolo izao no nanoratra tao amin'ny Twitter ny alahelony amin'izao fahafatesan'i Iyengar izao sy ho fankasitrahany ny asany nandritra ny taona maro.
BKS Iyengar tao Londra tamin'ny 1971. CC-BY Wikipedia
Heverina ho iray amin'ireo olona nanana anjara toerana lehibe nampalaza ny Hatha Yoga i Iyengar, na izany tao India ary tany ampitan-tsisintany ihany koa. Ny “Hatha” Yoga dia mitady ny “fandanjalanjana ny masoandro sy ny volana” ao amin'ny olona mampihatra azy. Nampianarin'ny zaodahiny Yoga teo amin'ny faha-16 taonany tamin'ny 1935 i Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, na “BKS Iyengar” raha afohezina. Taty aoriana, rehefa lasa mpampianatra yoga i Iyengar, dia ny mpitendry mozika Yehudi Menuhin no nanasa azy hampianatra ivelan'i India, nahatonga ny lalan'asan'i Iyengar hizotra any amin'ny maha-mpampianatra yoga azy any amin'ny firenena tandrefana. Nampianatra olona anarivony sy nanoratra boky momba ny yoga 14 izy tamin'izany.
Efa nampivoatra ny Hatha Yoga efa antsoina hoe Iyengar Yoga, izay manasongadina ny antsipirihany, ny fanoritana mazava ary ny fanandrifiana eo amin'ny fanaovana fihetsika ary ny fifehezana ny fiaina aza i Iyengar. Carrie Owerko, iray amin'ny mpianatr'i Iyengar, no nanana anjara toerana nahatonga azy ho mora anatonan'ny rehetra kokoa, na ahoana na ahoana fetra ara-batana na ara-tsaina misy eo amin'izy ireo. “Nananan'ny olona maro ny traikefan'ny yoga tany Etazonia ny Iyengar. Mety ho tsy nampianatra ny Iyengar ilay mpampianatra, fa nisy ny tarakevitra Iyengar yoga eo amin'ny lafiny maro ihany teo amin'ny mpampianatra,” hoy izy.
Nahazo ny mariboninahitra telo ambony indrindra ho an'ny sivily ao India i Iyengar: ny Padma Shri tamin'ny 1991, ny Padma Bhushan tamin'ny 2002, ary ny Padma Vibhushan tamin'ny 2014. Ny Time magazine ihany koa dia nametraka azy tao anatin'ny olona 100 mahaova ny hafa indrindra manerana izao tontolo izao tamin'ity taona 2014 ity.
Ny marainan'ny fahafatesan'i Iyengar, naneho ny alahelony tao amin'ny Twitter ny Praiminisitra Indiana Narendra Modi. Fantatra amin'ny fanaovana yoga, izay lazainy fa ahafahany mamita ny fandaharam-potoanany i Modi.
Malahelo tokoa aho tamin'ny fandrenesana ny fahalasanan'i Yogacharya BKS Iyengar ary manolotra ny fiaraha-miory amin'ireo mpanaraka azy manerana izao tontolo izao.
Nisioka fanomezam-boninahitra azy tao anaty sariohatra handravahana ny tarakevitr'i lyengar tamin'ny fampianarana yoga manerana izao tontolo izao ny mpanao gazety sady mpanolotra televiziona Shaili Chopra. Nanova ny endri-tsoratra hoe “asana” (paozy atao rehefa manao ny Hatha Yoga) ho “aasaan,” izay midika hoe “mora” amin'ny teny Hindi ny sary nataony. Avy amin'izay ny sary no manambara ny nanamoran'i lyengar ny yoga ho “mora.”
“@nivedithalva: #iyengar – #Amul does it so well ! RIP pic.twitter.com/W5dc5YuhWw”
— Shaili Chopra (@shailichopra) August 26, 2014
Nahavita #iyengar tsara i #Amul! Mandria Am-Piadanana!
Amin'ireo misaona ny fahalasanan'i Iyengar dia ahitana atleta malaza ka hatramin'ny mpiserasera aterineto tsotra. Nanome voninahitra ihany koa ilay Karana kalazan'ny cricket Sachin Tendulkar tamin'ny filazana fa ny asanas nianarany tamin'i Iyengar no nanampy azy betsaka tamin'ny maha-atleta azy. Naneho ny fankasitrahany an'i lyengar sy ny alahelony tamin'ny nandrenesana ny fahalasanany koa ireo mpanao yoga hafa.
I sit in deep silence w/ tears of gratitude streaming down my face that #yoga crossed my path this lifetime. #Iyengar pic.twitter.com/ohYnwIoctX
— Ashley Turner (@AshleyTurner1) August 20, 2014
Mipetraka ao anaty fanginana lalina arahin-dranomasom-pankasitrahana fa nandalovako tamin'ny lalam-piainako ny yoga.
Nisioka i Elizabeth Kadetsky, mpianatr'i Iyengar iray, izay nanoratra boky iray momba ny fotoana nianarana taminy:
BKS–very sad and feeling your spirit really fly through here #bksiyengar
— Elizabeth Kadetsky (@ekadetsky) August 20, 2014
BKS–malahelo tokoa ary mahatsapa fa misidina eto tokoa ny fanahinao
Mikasa ny hamoaka boky ho fanomezam-boninahitra azy ny Ivotoerana Ambonin'ny lyengar Yoga ao Manchester sy ny Distrika, izay manana kilasin'ny yoga izay mikendryny hampiroborobo ny fahatakarana sy ny fampiharana ny Iyengar Yoga.
We are creating a book of your reflections and condolences so please continue to send them if you wish. #BKSIyengar pic.twitter.com/KtRIo6rfiV
— Iyengar Yoga (@MDIIY) August 23, 2014
Manangana bokin'ny eritreritrao sy ny fiaraha-miory avy aminao izahay koa miangavy ny handefa izany raha sitrakao.
An'arivony ny misitraka ny asan'i Iyengar no tsy afa-mitsidika ny toera-pisaonana hanome voninahitra sy hiara-miory hita maso. Ny tambajotra sosialy antserasera anefa no fitaovana mahery vaika ahafahana maneho ny alahelony sy ny fankasitrahany. Mbola malaza ny diezy #Iyengar amin'izao fotoana izao, henika ny sarin'i Iyengar sy ireo zavatra malaza nolazainy. Mazava loatra fa tsy ho kely noho izao mihitsy no antenaina noho ny lova napetrak'izany lehilahy izany.